Iinkampu zokuxininisa zibuyela eYurophu, ukuba zenze i-gays. - Gay Shop
Iinkampu zokuxininisa zibuyela eYurophu, ukuba zenze i-gays.
Njengokuba baninzi abaphika ukubulawa kweNtshabalalo, ngoku abachasayo bevela empuma yeYurophu bathi iinkampu zoxinzelelo ze-gay azikho.
"Ababizwa ngokuba ngamalungelo omntu benza zonke iintlobo zemali," kusho uMongameli weChechnya uRamzan Kadyrov. I-Chechnya yindawo enkulu yaseYurophu yokutshutshisa abantu basetyhini.
Iindaba zeenkampu zoxinzelelo zaphuma kwi-2017. Amajelo eendaba aseRussia kunye namaqela oluntu amalungelo azisa ilizwi kule ntshona. E-Chechnya, amajelo aseburhulumenteni abalawulwa ngurhulumente kunye neenkcaso azichaswanga, ngoko ke ukufumana ubungqina obuvela kurhulumente akunakwenzeka.
UMongameli uKadyrov wongezelela esithi, "Yonke into eyenziwa ngamagosa angaphandle ahlawulwa iikhokecks ezimbalwa." I-kopeck, eyaziwa ngokuba yi-ruble, iyinkozo e-Chechnya. Enye kopeck ixabisa ngaphantsi kweentente ezimbini zase-US.
UMongameli uKadyrov waya kude ukukhanyela abantu abathandana nabo basemzini wakhe. Ulwimi lwakhe lwaluqhelana ngokungaqhelekanga kwizinto ezichasayo kumazwe aseMpuma Mpuma. Wathi, "Ukuba kukho abantu abanjalo e-Chechnya, izigqeba zomthetho zingeke zifuneke ukuba zenze ntoni nazo kuba izalamane zazo ziza kubathumela kwindawo apho kungekho kubuya khona."
Ukukhanyela kwakhe kwenyuka kwinqanaba elidlulileyo xa wathi, "Ukuba kukho i-gays, susa kude nathi. Ukucoca igazi lethu, ukuba kukho nayiphi na into, thabathe."
Imidiya yaseRashiya ithumele amabali amaninzi malunga noshutshiso lwama-gay kummandla. Abantu abambalwa abasindileyo bevela kwingingqi babika ngethuba lokuhlushwa. Ubuncinane omnye, uMoses Eskarkhanov, waxolisa ngenxa yeengxelo zakhe zokuhlushwa aze aphikisana naye.
Nangona ikhululekile kwiidela e Chechnya, u-Eskarkhanov unentsapho ehleliyo. Uhlala eJamani. Batsho ngokucacileyo ukuba xa ndiqhubeka ndithetha, bekuya kubakho iingxaki. Bathi ndimele ndiqale ndicinga ngentsapho yam, "watsho iincwadana.
Abanye baphumelele kwaye abanalo intsapho ukuba babe nexhala malunga nokubanjwa kwamabali abo okuxhatshazwa nokuxhatshazwa.
Iiprotesti eNtshona Yurophu, ngokukodwa e-UK naseRashiya, ziye zaqwalasela ingxaki. Iiprotesti zase-US zincinci. Abasetyhini abambalwa base-US baxinezela isenzo sokudibanisa.